Tag: zoo ngosi | Martech Zone
Tag: zoo ihe ngosi
Na Tọzdee, Septemba 26, 2006 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
Nwelite: - Site na nhazi saịtị ọhụrụ na enweghị ojiji nke njikọ ndị ahụ, ekpebiri m iwepụ ha. Enweghị mkpesa ọ bụla! Mgbanwe a ka na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya. Abụ m isi nke ụfọdụ egwuregwu na-aga n'ihu na Nektros. Ntinye ya bụ ihe kpatara ị ga-eji tufuo ihe niile ndị a njikọta njikọ ibe mmekọrịta mmadụ na ibe gị. Enwere m mmadụ ole na ole ndị ọzọ